Ahụmahụ Semalt: Ihe Ị Kwesịrị Ịmara Banyere Web-Crawling
Nchọpụta ọchụchọ na-agbagha ọdịnaya iji wepụta ya na ịntanetị. Ihe nchọgharị weebụ mere SEOdị mfe ịchọta. Ikike nke saịtị XML na-enweta peeji nke saịtị ahụ, ma ọ chọrọ ntinye ngwa nke SEO nke na-eji saịtịejiji iji nye ọnụnọ nke ozi a chọrọ.
Onye ọkachamara Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, Frank Abagnale na-akọwa akụkụ ndị ahụ, nke ị ga-ama banyere ebe nrụọrụ weebụ na-awagharị.
Ghọta ihe dị n'ime saịtị ahụ
Google na-agbagharị na-eme ka nlezianya nyochaa ngwaahịa na ozi ahụtinye na ebe nrụọrụ weebụ. A ga-ebute ngwaahịa nke ngwaahịa ahụ dị ka atụmatụ ndị a haziri ahazi mgbe usoro nke ibe kwesịrịenweghi ike imeghari, ihe ohuru ohuru ma obu imeghe akwukwo ndi a na-akwadoghi - barmah hats retailers usa.
A ga-egbochi ike ịkwọ aka
Njehie na-emepụta ihe na-eme ka ọ ghara ịnweta ụfọdụ akụkụ nke ozi na otuọchụchọ nwere ike ime n'ihi enweghị ike nke crawler iji mezue ohere. Ụfọdụ okwu SEO nwere ike ime ka usoro nhazi ma ọ bụ gbanwereIhe aha URL na nza nke efu nke edere a choro. Ntụle na robots.txt ma ọ bụ Noindex zuru ụwa ọnụ nwere ike inyere aka dozie nkwụsị ahụ.
Ịghọta URLs a na-ejikarị ekweta
N'agbanyeghị SEO ziri ezi, ụfọdụ URL nwere ike ịjụ n'ihi robots.txt. Ịmụ ihesaịtị nwere ike ịnweta na-eme ka o kwe omume ịmata ọdịiche dị iche iche na-ezighị ezi nke nsị..
Mara amahie 404
Ighaghachi njehie 404 nwere ike ịbịaru n'ihi ịnweghi ozi zuru ezu maka ọchụchọ ahụengines iji weghachite ma ọ bụ na saịtị ahụ enweghị akwụkwọ maka ịkwụsị. Onye ahịa nwere nzube nke ịbawanye arụmọrụ n'ịntanetị site naSEO ga-ahụ ma ghọta ihe kpatara ozi njehie ma ọ bụrụ na ha ga-achọ mkpebi.
Ịghọta ngwongwo na otú o si egosipụta redirects dị mkpa iji belataọtụtụ redirects tupu search engine achọpụta ezigbo peeji nke dị mkpa. Mgbanwe nke 302 redirects na 301 na-enye aka ntancha nke ihe dị ka 15pasent nke ndị na-enyefe na peeji nke ikpeazụ.
Chọpụta data adịghị ike
Crawlers bụ ngwá ọrụ magburu onwe ya maka njirimara nke ozi na-adịghị mmana ebe nrụọrụ weebụ. Ha na-enyocha ma ọ bụrụ na peeji nke abụọ dị na ya ma ọ bụ na ha nwere data meta na-ezighị ezi nke na-agọnahụ ogo nke ibe ma SEO ruruarụ ọrụ site na igwe ojii Noindex.
Nkọwa nke mkpado na mkpado
Ntinye mmeghe nke mkpado nwere ike ịbụ isiokwu nke ọdịnaya ọdịnaya,mgbe eji ya eme ihe na-ezighi ezi. Nnyocha nke ọdịnaya dị mkpa iji na-edeba site na iji crawlers na-eme ka mwepụ nke ọdịnaya ọdịnaya.
Chọta data omenala
Ịme RegEx ma ọ bụ XPath na mgbakwunye na crawlers nwere ike inye njirimara nkeokwu na akụkụ XML nke akwụkwọ ahụ site na nyocha ọchụchọ. Akụkụ a nke usoro SEO na-agwa onye nkwọ ahụ ka ọ jidere isiihe ndị dị na peeji nke dị ka ọnụahịa, usoro data, na ndịna-emeputa nke ọdịnaya.
Ọtụtụ crawlers jiri Google Search Console na Google Analytic ngwá ọrụiji nye ihe omuma maka akwukwo ndi mmadu nile. Nke a na-akwado njikarịcha nke akwụkwọ ndị a chọrọ ma nyekwa data achọrọ iji tinye yaozi achọrọ na map ọchụchọ.
Ihe kachasị mma site na crawlers na SEO usoro dabere na ụdị nke weebụsaịtị,na ihe di n'ime ya. Ịmata ụdị ngwá ọrụ kwesịrị ekwesị bụ ụzọ mbụ ị ga-esi nweta ọnụnọ n'ịntanetị nke nwere nkwaọganihu. Ịchọta ihe kpatara ihe ọmụma ahụ ekpugheghi site na nyocha na-eme ka otu ụzọ dị mfe dozie nsogbu ahụ.